हातमा पूर्जा हुँदाहुँदै भूमिहीन बने १५० परिवार, के पीडितले न्याय पाऊलान्? – Himalaya TV
Home » समाचार » हातमा पूर्जा हुँदाहुँदै भूमिहीन बने १५० परिवार, के पीडितले न्याय पाऊलान्?
हातमा पूर्जा हुँदाहुँदै भूमिहीन बने १५० परिवार, के पीडितले न्याय पाऊलान्?
३० श्रावण २०७५, बुधबार १६:५५
विजय घिमिरे/विराटनगर, ३० साउन । मोरङको रंगेली नगरपालिका १ ववियाविर्तामा भानुभक्त कार्कीले करिब १० वर्ष अगाडि धाडेवा परिवारसँग किनेको ३ कठ्ठा जग्गाको लालपूर्जा हातमा भएपनि उनी जग्गाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँ यस्तो अवस्थामा पुग्ने उनीमात्र होइनन्, अहिले १५० परिवार यस अवस्थामा पुगेका छन् ।
मोरङको रंगेली नगरपालिका १ ववियाविर्ताका करिब डेढ सय परिवार हातमा जग्गाधनी पूर्जा हुँदासमेत घरबारविहीन हुने अवस्थामा पु¥याउने भने धाडेवा परिवार हुन् । जग्गाधनी धाडेवा परिवारले नियतबश यस्तो अवस्थामा पु¥याएको पीडितहरूले आरोप लागाएका छन् । रंगेलीस्थित मालपोत कार्यालय र धाडेवा परिवारको मिलेमतोले धनीपूर्जा हातमा हुँदाहुँदै पनि जग्गाविहीन हुने अवस्थामा पुगेको पीडित चन्द्रकला थारुले बताइन् ।
२०६० सालयता जग्गा खरिद गरेर बसोवास गर्दै आएका उनीहरू वर्षेनी मालपोत तिर्दै आएका छन् तर जग्गा रोक्का नगरी पास गरिदिएका कारण विचल्लीको अवस्थामा पुगेका हुन् । करिब १५ वर्षदेखि स्थानीयलाई जग्गा बिक्री गरी रजिष्ट्रेशन पास गर्दै आएका विराटनगर निवासी धाडेवा परिवारबीच आन्तरिक किचलो र अंश मुद्दाका कारण स्थानीय डेढ सय परिवारको उठिबास हुन लागेको धाडेवा परिवारसंग ८ कठ्ठा जमिन किनेर बसोवास गर्दै आएका कमल बहादुर कार्कीले बताए ।
धडेवा परिवाका ५ दाजुभाइले पहिले नै अंश बण्डा गरिसकेका थिए । अंशमा किचलो गरेर अदालत गएपनि आफ्नो भागमा आएको जग्गा दाजुभाइले बेच्दै गए । जग्गा रोक्का नगरी अदालतमा मुद्दा चलाएको पीडित शंकरप्रसाद दाहालले बताए । अंश मुद्दा हाल्ने तर जग्गा रोक्का नगरेको कारण यस्तो अवस्था आएको प्रदेश १ का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए ।
सयौंको सङख्यामा आएका स्थानीयले मंगलबार उच्च अदालत विराटनगर अगाडि धनीपूर्जा प्रदर्शन गर्दै न्यायको माग गरेका थिए । जग्गा गुम्न लागेको ढिलो गरी थाहा पाएका स्थानीयले रंगेली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा साउन २२ उजुरी दिएपछि नगरपालिकाले आगामी भदौ ५ गतेलाई छलफल बोलाएको थियो । नगरपालिकाले पत्र काटे लगत्तै नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर पत्र काटेकोले खारेज गरी पाऊँ भनी जग्गा धनी चन्द्रशेखर धाडेवाले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतमा आज त्यसैको सुनुवाई भएका कारण न्याय पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
धाडेवा परिवारको साविक ववियाविर्ता गाविस वार्ड नं ७, ८ र ९ हाल रंगेली नगरपालिका १ मा करिब २ सय २८ बिगाह जमिनमध्ये स्थानीयले करिब १ सय ८२ बिगाह खरिद गरेर जोतभोक गरिरहेका छन् । स्थानीय पवन धाडेवा, युवराज धाडेवा, भरवलाल धाडेवा, विरेन्द्र धाडेवा समेत मिली चलनचल्तीको दरमा जग्गा बिक्री गर्दै आएका थिए । धाडेवा परिवारसंग खरिद गरेका जग्गामा स्थानीय पीडितहरूले आफ्नो घरबास गरी जग्गा जोतभोक गर्दै आएका थिए ।
तर अंशवण्डाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि धाडेवा परिवारका अंशियारमध्ये अजय धाडेवाले मालपोत कार्यालय रंगेलीबाट स्थानीयको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भई गएको जग्गासमेत दर्ता खारेज गरी आफ्ना परिवारको सदस्यको नाममा प्रक्रिया मिलाएर नामसारी गरेपछि स्थानीय घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
स्थानीय शंकरप्रसाद दाहालले अदालतले न्याय दिनुपर्ने भन्दै कि जग्गा पाउनुपर्ने नभए अहिलेको दरमा जग्गा बापतको रकम पाउनुपर्ने माग गरे । उनले आफूहरू पीडित भए आन्दोलन गर्न समेत तयार रहेको बताए । उच्च अदालतले आज भने यस विषयमा केही फैसला सुनाएको छैन । अधिवक्ता समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले यो मुद्धा राजनीतिक तवरबाट धाडेवा परिवारसंग बसेर छलफलमार्फत टुङग्याएर स्थानीयले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।